Nei Vanhu Vakamira Kutevera Chako Brand? | Martech Zone
Mugovera, March 21, 2015 NeChishanu, Kurume 20, 2015 Douglas Karr
Imwe yeedu kufarira infographics isu takagadzira uye tikaburitsa yaive Sei Vanhu Vachikuteedzera Iwe pa Twitter. Vafudzi vakawana chiseko kubva mairi uye netariro chakavaita kuti vafungisise yavo yemagariro midhiya yekutsikisa zano panguva ino.
Ndiri kuzotaura chimwe chinhu pano chinogona kuvhundutsa vamwe vanhu:
Ini handina basa kana vanhu vasina kunditevera kana kuzvinyoresa kubva kuemail yangu.
Ndiri kunzwa kurira kwehasha nekuvhunduka izvozvi… uye ini handina basa nezveavo, futi. Ndiri kurwara uye ndaneta nevashambadziri kudzingirira mboni dzemaziso pachinzvimbo chemhedzisiro. Ruzhinji rwevateveri, vateveri uye vanyoreri havana basa kubhizinesi rako. Izvi hazvireve kuti haufanire kuva nehanya nevateereri ivavo, ndiri kungotaura chokwadi. Idzo nhamba dzinongova nzira yekusimbisa yevatengi nemabhizinesi ekukutonga pa… hapana chimwe chinhu.
Uye nekuda kwekuti mumwe munhu asina kunyoreswa hazvireve kuti mhando yako yaita chimwe chinhu zvakaipa. Kune zviuru zvezvikonzero nei mumwe munhu achirega kutevera kana kuzvinyoresa kubva kune yako social chiteshi kana yako tsamba tsamba. Pamwe vakasiya kambani, pamwe vakasimudzirwa, pamwe basa ravo rakachinja, pamwe vakafunga kuti chiratidzo chako chaive chakasiyana zvachose.
Kurera hachisi chiito chekutarisira wese muteveri kana kunyorera kuti atenge. Kukura zvakare inguva iyo tarisiro inogona kuwana nzwisiso muchiratidzo chako uye wosarudza kana uri akagwinya kana kwete. Saka… vamwe vanobva.
Izvi zvinoreva here kuti hapana zvinhu zvauri kuita kuti uvadzinge? Zvirokwazvo kwete. Ini ndakangopindura mumwe wandaishanda naye svondo rino ndikamuudza kuti aitsika-tsika zvishoma pamataurirwo uye spamminess yeemail ake kwandiri. Ini ndaida kuti azive kuti aisundidzira zvakanyanya uye achidzokera kumashure, zvikasadaro anogona kundirasa. Zvakare, ini handisi mutengi wake akakodzera saka pamwe haafanire kunditeerera!
Ongororo iyi yakaona kuti 21% haina kutevedzwa nekuda kwechinhu chinofinha, nekuda kwekuwandisa kwemapositi paFacebook kana kuwanda kwemaficha. Zvishoma zvinogona kuwanda… Saka funga kuwanda kwezviyero zvako nekuzvienzanisa kune vamwe vari muchikamu chako kana kumhanyisa bvunzo kwaunoderedza kuwanda.
Ndakazvitaura zviuru nezviuru, chikonzero nei vanhu vachiteerera iwe nekuti uri kuvapa kukosha. Enderera kupa kukosha uye iwe unozochengeta akakodzera vateveri uye vanyoreri. Nekufamba kwenguva, iwe unozovaka kuvimba uye kubatanidzwa kuchakurumidza kutevera. Asi rega kuzvirova wega kana vanhu vashoma vasiya… zvichave zvakanaka. Enda unotsvaga zvirinani!
Fractl uye Buzzstream vakaongorora 900 vashandisi venhau venhau kuti vawane mhinduro idzi uye zvikonzero zvekurasikirwa nevateveri.
Tags: kuwedzera vateereririnokura runyorwa rwevanyorizvikonzero vanhu kusarega kuteverazvikonzero vanhu kuzvinyoresaukoshi